Khayre oo kormeeray Xarumaha ciidanka xaslinta amniga Magaalada Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
Ra’isul Wasaaraha ayaa marka hore tegay xaruntii hore xisbiga ee ka mid ah xarumaha ay deggan yihiin Ciidamada Xasilinta Caasimadda ayaa kulan la qaatay saraakiisha isla-markaana halkaasi kula hadlay ciidamadda.
“Anaga iyo Shacabka Soomaaliyeed, waxaa idin kaga mahadcelinaynaa howlgallada aad fuliseen oo ay cadowga ee kaaga hortagteen falalka cadowgu damacsanaayeen. Dadalkiina dad Soomaaliyeed ayaa ku badbaaday waxana idinku ammaanayaa idinkooda ku shaqeeya duruufo adag sida sharafta leh ee dalkiina iyo qarankiina ugu adeegteen” ayuu yiri raisul wasaaraha.
“Yididiillo ayey na gelineysaa horumarka dhanka amniga ah ee aad ka sameeyseen caasimadda tan markii qorshaha xasilinta caasimada ay dejisay xukuumadda, waxaan dooneynaa inaad sii laba-laabtaan dedaaladiina ku aadan nabadeynta Muqdisho, dawladdana waxay kordhin doontaa wax walba oo awooddeeda ah si loo yareeyo daruufaha aad ku shaqeyneysaan”. Ayuuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u sheegay ciidamadda xasilinta caasimadda ee uu maanta booqday in ay xoojiyaan xirriirka shacabka si ay ugu sahlanaato ka hortagga falalka guracan ee kooxaha nabad-diidka sida uu yiri.
The post Khayre oo kormeeray Xarumaha ciidanka xaslinta amniga Magaalada Muqdisho appeared first on Ilwareed Online.